Warshada wax-soo-saarka wax-soo-saarka ee Saddex saf - Shiinaha Sadex saf ah
Wareegtada Saddexda Saf ah ee aan Goynta ahayn ee Mashiinnada Culus
1. Si degdeg ah u geyn iyo qiimo macquul ah
2. Waxaan bixin karnaa EN3.1 iyo EN3.2 Shahaadada Qalabka Ceyriinka
3. Waxaan u keeni karnaa CCS si ay wax u dilaan
4. Roller saddex saf ayaa leh culays weyn
5. Waxaan ku caawin karnaa in aan dooranno moodooyinka ku habboon oo aan haysanno adeeg iib ah oo wanaagsan
Saddex saf oo rullaluistuyaal ah oo aan xidhnayn 130 Taxane ah oo loogu talagalay mashiinnada hawl culus
1. Rullallaluistemadka saddexda saf ah ee wax ku dhufanaya waxay leeyihiin culeys weyn
2. Wakhtiga wax-soo-saarku waa ku dhawaad ​​40 maalmood
3. Waxaan bixin karnaa ISO9001: 2015, CCS, shahaadada SGS
4.We can make OEM-slewing bearing with your picture
5. Kormeer dhamaystiran ayaa loo baahan yahay
Gear-gude Saddex saf oo rullaluistuyaal ah oo wax lagu dilayo oo loogu talagalay wiishka badda
1. Saddex saf oo wax lagu duubo rullaluistu waxay ka kooban tahay saddex siddo oo kursi
2. Saddex saf oo rullalulaytada wax lagu dilo waxa ay leedahay waajibaad culus
3. Rullallallada saddex safka ah ee wax lagu dilo waa culeyska ugu badan
Saddex saf oo rullaluistuyaal ah oo leh culays culus oo wiish taayir leh
1. Waxaan dileynaa warshaddii dhalmada
2. Giraan wax lagu dilo oo culus
3. Muddada wax-soo-saarka oo gaaban
4. Iibinta Warshada oo leh qiime tartan ah
Iibka Warshada oo Tayo Sare leh oo Sadex-geesood ah oo Tayo Sare leh
Sadexda saf ee wax lagu gooyo rullaluistuyada ayaa si weyn loogu isticmaalaa mashiinnada hawl-culus kuwaaso u baahan goob shaqo oo waaweyn.
Xilka culus ee Tayada Sare leh ee Sadexda saf ah ee rullaluistemadka ah
1. Isdhexgalka warshadaha iyo ganacsiga si loo hubiyo in hab kasta oo shaqo ee alaabta si adag loo xakameyn karo.
2. Tayo tartan iyo qiimo jaban.
3. Tignoolajiyada horumarsan, baakadaha xirfada leh, gaarsiinta degdega ah, iyo saadka badda, dhulka iyo hawada horumaray.
4. Adeegga iibka ka dib wakhtiga ku habboon ayaa hubiya in isticmaalayaashu, ay leeyihiin waayo-aragnimo weyn.
XZWD|Shaqada Culus ee Sadexda Saf ee Rooliga ah ee Roodhka ah ee mashiinka caajiska ah ee Tunnel
1.Q: Ma waxaad tahay shirkad ganacsi ama soo saaraha?
A: Waxaan nahay saaraha dilaaga xirfadeed leh waayo-aragnimo 20 sano ah.
2.Q: Intee in le'eg ayay tahay wakhtiga dhalmada?
J: Guud ahaan waa 4-5 maalmood haddii alaabtu kayd tahay.ama waa 45 maalmood haddii alaabtu aysan ku jirin kaydka, Sidoo kale waa iyadoo loo eegayo tirada.
3.Q: Ma bixisaa muunado?ma bilaash baa mise waa dheeraad ?
J: Haa, waxaanu bixin karnaa muunada, waa dheeraad.
4.S: Ma ku siin kartaa habayn gaar ah iyadoo loo eegayo shuruudaha shaqada?
A: Hubaal, waxaan u qaabeyn karnaa oo soo saari karnaa xargaha wax lagu dilo ee xaaladaha shaqada ee kala duwan.
5.Q: Ka waran dammaanaddaada?
J: Waxaan bixinaa adeega farsamada iibka ka dib nolosha oo dhan.
rullaluistemadka saddex saf oo wax lagu dilayo
Wareegga radial-ka iyo orbit-ka midna uma kala soocna si gaar ah, waxay ka dhigaysaa culayska saf kasta ee rullalusha waa la xaqiijin karaa, taasoo ka dhigaysa inay qaadi karto dhammaan noocyada kala duwan ee culeyska isku mar. Saddex saf oo rullaluistir ah oo wax lagu dilo giraanta xanbaarsan ayaa ah tan ugu weyn afarta nooc ee cabbirka axial-ka iyo radial-ka ayaa aad u weyn ilaa xad, qaab-dhismeedka saddexda saf ee giraanta wax lagu dilo waa mid aad u adag.